त्रिभुवन विमानस्थलमा ७ करोड राजस्व नतिर्ने ३ मदिरा पसलको सामान जफत
त्रिभुवन अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले ६ वर्षदेखि भाडा नतिरेका ३ वटा मदिरा पसलको समान जफत गरेको छ।
विमानस्थलको अन्तर्राष्‍ट्रिय टर्मिनलस्थित आगमन कक्षमा रहेको युनिभर्सल लिकर र प्रस्थान कक्षस्थित युनिभर्सल र ग्रिनलाइन लिकर सपले विमानस्थल कार्यालयलाई जरिवानासहित रु.७ करोड १० लाख तिरेका थिएनन्।
पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि भाडा नतिरेपछि विमानस्थल कार्यालयले गत जेठमा ३ वटै पसलमा सिलबन्दी गरेको थियो। सिलबन्दीपछि भाडा तिर्न पत्राचार गर्दा पनि सञ्‍चालकले आनाकानी गरेपछि पसलमा भएको सामान जफत गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षत्रीले जानकारी दिए। उनले भने, “कानूनी प्रकृया पूरा गर्दै रक्सीहरू जफत गरी पसल खाली गराएका छौं।”
जफत गरिएको सामान नियमानुसार बिक्री गरिने र टेण्डर प्रक्रियाबाट ३ वटै पसल नयाँ व्यवसायीलाई भाडामा दिइने क्षत्रीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जफत गरिएको सामानको मूल्य करीब रु. १५ लाख मात्र छ। विमानस्थलमा व्यवसायी प्रमोद राणाले लामो समयदेखि मदिरा पसल सञ्‍चालन गर्दै आएका थिए। २०६४ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा ड्युटी फ्री पसल सञ्‍चालन गर्न पाइने व्यवस्था खारेज भएपछि राणाले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई कारोबार गर्दै आएका थिए।
तर, २०६९ सालदेखि सम्झौताअनुसारको भाडा नतिरेका उनले राजनीतिक आडमा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलका ३ वटै पसल कब्जा गर्दै बसेका थिए। गत जेठसम्म भाडा रकम रु.५ करोड ५० लाख पुगेपछि विमानस्थल कार्यालयले त्यसमा ३० प्रतिशत जरिवाना (रु. १ करोड ६० लाख ) जोड्दै रु.७ करोड १० लाख तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो।